वैदेशिक रोजगारीमा कुवेत पुगेकी एक नेपाली महिलाको मृ'त्यु - Prateek Nepal
January 14, 2021 January 14, 2021 Ramash kunwar
दोहा– वैदेशिक रोजगारीको लागि कुवेत पुगेकी एक नेपाली महिलाको मृ’त्यु भएको छ । घरेलु कामदारको रुपमा गैरकानूनी बाटो हुदैँ त्यहाँ पुगेकी मकवानपुर घर भएकी सरिता थिङको मृ’त्यु भएको हो ।
गैरकानुनी रुपमै कार्यरत रहेकी थिङको उपचारको क्रममा त्यहाँको आदान अस्पातलमा मृ’त्यु भएको कुवेतस्थित नेपाली दूतावास स्रोतले जानकारी दिएको ही ।
उनी अल्सरको बिरामी थिइन् । मृ’तकको परिवारसँग सम्पर्क गरी शव स्वदेश पठाउने तयारी गरिएको भए पनि गैरकानूनी बाट हुदैँ त्यहाँ पुगेको र स्पोन्सरको घरबाट समेत भागेको हुँदा श’व नेपाल पठाउन आर्थिक समस्या भएको बताइएको छ ।
शव पठाउन समस्या भएपछि आर्थिक संक’लन गर्न थालिएको सामाजिक अभियन्ता चन्द्र पाइजा पुनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार श’व स्वदेश पठाउन ३९० कुवेती दिनार लाग्ने र दूतावासले पनि केहि गर्न नसक्ने भनेपछि आर्थिक संक’लनको कार्य थालिएको उनले बताए ।
काठमाडौँ । शरीरमा मुसा पलाएर हैरान हुनुहुन्छ ? या मुसा पलायो भने के गर्ने भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ ? चिन्ता मेटाउने नाममा मुसा काटेर–कोट्याएर फाल्ने गल्ती नगर्नुहोस् । मुसाबाट रगत निस्किएपछिको परिणाम झनै भया’वह हुनसक्छ ।
के हो मुसा ?
शरीरमा मुसा ‘ह्युमन प्यापिलोमा’ भाइरसको संक्रमणले आउँछ । नवजात शिशुबाहेक प्रायस् सबै उमेरका मानिसमा यो रोग लाग्नसक्छ । भाइरसको संक्रमणपछि छालामा नदुख्ने खालको सानो ट्युमरजस्तो आउँछ । यो कसैमा कम हुन्छ भने कसैमा धेरै । धेरै या थोरै आउने दर मानिसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा भर पर्छ । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकामा मुसा बढी आउँछ । बलियो क्षमता भएकालाई एक–दुईवटा आएर आफैँ हराउन सक्छ ।
सौता बेर्होन तयार छु तर घर फर्किदिनुस् भन्दै एउटी श्रीमतीले श्रीमानलाई गरिन् आग्रह, यस्तोसम्म गरेका रहेछन् श्रीमानले, रुदैं आईन् मिडियामा (भिडियोसहित)
पाकिस्तानी का’ण्ड,नेपालि चेलि रुँ’दै मिडीया मा ज’बर ज’स्ति मेरो भिडियो बनायो ! हेर्नुहोस पूरा भिडियो…
December 17, 2020 December 17, 2020 Ramash kunwar
नुवाकोटका जीवन तामाङको मलेसियामा सुतेकै अवस्थामा मृ,,त्यु
October 9, 2020 October 9, 2020 PK